Kedu oge bụ oge kacha mma ịgba mmiri n'ubi gị? - Atụmatụ Ugbo
Kedu oge bụ oge kacha mma ịgba mmiri n'ubi gị?
esi eto eto succulents site na nkpuru
Oge Ezigbo Oge: Dị Ka O kwere Omume n'ụtụtụ
Oge nke abụọ kacha mma ịgba mmiri n’ubi gị: N’uhuruchi / n’uhuruchi
Emela Mmiri n’abalị
Ndụmọdụ maka ịgbara ubi gị mmiri
Bụ onye nlekọta ọhụrụ siri ike.
Enwere ọtụtụ ihe iji mụta - esi amalite mkpụrụ , otu esi elekọta osisi gị, otu esi egbochi ọrịa… ndepụta na-aga n'ihu.
Ma ị ga-ekwere m ma ọ bụrụ na m gwara gị na otu n'ime mmejọ ndị ọhụrụ ndị na-elekọta ubi ọhụrụ na-eme bụ otu n'ime ihe dị mfe idozi?
Ghọta oge kachasị mma iji gbaa ubi gị ogige bụ ihe dị mkpa iji too eto, ahịhịa mara mma.
Isiokwu a ga-enye gị nnyocha nke mgbe mmiri a ubi, ma ihe ga-akọwa ihe gịnị kpatara . Ozugbo ị ghọtara ihe kpatara ya, ị gaghị echefu mgbe ị ga-agba mmiri ọzọ.
PS Gbaa mbọ hụ na ị nwere mma ogige sooks , sooks nozulu , na sooks ukwu tupu ị waterụọ mmiri!
Ọ bụrụ na ị bụ onye ụtụtụ - n'adịghị ka m - ị ga-enwe obi ụtọ ịmụta na ụtụtụ ụtụtụ bụ aka oge kachasị mma iji gbaa ubi akwụkwọ nri (ma ọ bụ ogige ọ bụla ọzọ, maka okwu ahụ).
Ihe kpatara ya dị mfe: mgbe ị na-agba mmiri n'ụtụtụ, anwụ na-achasi ike ma okpomọkụ ka dị jụụ. Mmiri nwere oge iji banye n'ime ala ma banye n'ime sistemụ mgbọrọgwụ nke ogige gị na-agaghị efu ka anwụ.
Gbara mmiri n'isi mmiri na-echebe osisi gị site na oke okpomọkụ n'etiti ụbọchị, ebe ha ga-ejupụta na mmiri n'oge oge anwụ na-akụ ha n'oge. Nke a dị mma karịa ịnwa 'ịchekwa' osisi gị n'ụbọchị ọkụ site n'ịwụsa ha mmiri n'ehihie.
Busting a akụkọ ifo: Fọdụ ndị na-akọ ugbo n’oge ochie na-ekwusi ike na ịgbara mmiri mmiri n’ehihie ga-eme ka anyanwụ “chakpọ” osisi gị. Ha na-ekwu na ụmụ irighiri mmiri na-anọdụ na epupụta nke ahịhịa gị ga-enwe mmetụta dị ukwuu ka anwụ na-apụta wee gbaa akwụkwọ ahụ ọkụ.
Ọ bụ ezie na nke a ga - ekwe omume, ọ ga - abụ ihe a na - atụghị anya ya, naanị n'ihi na imirikiti ihu igwe anaghị adị nso ebe dị ọkụ iji mee ka mmetụta a. Ma ọ bụrụ na ha mere, osisi gị nwere ike ịnwe nsogbu ndị ọzọ dị oke njọ.
Ego ego ma ọ bụrụ na ị na-eji usoro mmiri mmiri na-agba mmiri ma ọ bụ a soaker sooks iji nweta mmiri gị.
Ọ bụrụ na, dị ka m, ị bụghị nke onye ụtụtụ, mgbe ahụ, nye osisi gị mmiri na mbubreyo n'ehihie ma ọ bụ na mgbede. Herekpụrụ ebe a doro anya: ị na-anwa ime ihe ọ bụla ị nwere ike ime iji zere ị waterụ mmiri n'etiti ehihie.
iji okpukpu nri n'oge okooko ogbo
Ọ bụ ezie na ịgbara mmiri na njedebe nke ụbọchị dị njọ karịa ụtụtụ, ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ ọzọ ọ ga - aka mma karịa ịghara ịgbara mmiri ma ọlị!
Ọ bụrụ na ị na-aga na mmiri mgbede, mee ike gị niile ka ị ghara inweta mmiri niile na akwụkwọ osisi gị. Akwukwo nkpuru bu ihe kpatara otutu oria na oria, dị ka ahịhịa juru eju nke nwere ike igbutu ubi niile.
Mee Ọ bụghị Mmiri na Abalị
Ọ bụrụ na ị nwere ike izere ya, emela mmiri n'abalị. Nnukwu ihe kpatara ya bụ ihe m kwuru n'elu - ị na-ede mmiri na ahịhịa na abalị, mgbe obere anwụ ga-eme. Naghị enye ala oge nkụ. Nke a bụ ezigbo uzommeputa maka ọrịa na ire ere, ma ọ bụghị ezigbo uzommeputa maka ogige dị mma.
kedu oke ogwu oke na oke
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere, mgbe ahụ sure mmiri n'abalị. Ma jiri mmiri dị ntakịrị karịa ka ị ga-eji eme ihe, n'ihi na enweghị ike ịmịcha mmiri. Nke ahụ pụtara na mmiri niile ị wụfuru n’ala ga-emikpu ma osisi gị ga-eri ya.
Ugbu a ị matara oge kachasị mma iji gbaa ubi, ka anyị kpuchie mmejọ ndị ọzọ ndị ọrụ ubi na-eme mgbe ha na-agba mmiri:
Zere ị -ụbiga ubi gị ókè na-akwụ ụgwọ niile.
-Waterụbiga mmiri ókè bụ otu n’ime mmejọ ndị kasị ukwuu ndị na-elekọta ubi na-eme. Ọ dị mfe ịme na nsonaazụ ya nwere ike ibute ọdachi. Gbara mmiri oge ọ bụla nwere ike igbu osisi dịka ọ dị mfe ịgbara obere mmiri. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịmata ihe ịrịba ama nke ị -ụbiga mmiri ókè, chọọ:
Akwụkwọ na-adịghị ike ma ọ bụ nke “sọks” na-achọ
Rotting na mgbọrọgwụ ma ọ bụ azuokokoosisi larịị
Atụmatụ nke epupụta na-browning
Mmiri mgbe niile.
Dị ka usoro isi, inye ubi gị ihe dị ka sentimita asatọ kwa izu bụ ezigbo echiche. Ma nke a dị ka iwu ọ bụla - e mebiri ya. Fọdụ osisi chọrọ ton mmiri, ebe ndị ọzọ na-adịkarị obere mkpa ọ bụla. Ikwesiri ime nnyocha banyere ahịhịa dị n’ubi gị ma nweta nghọta ọma etu ha chọrọ.
Nwere ike ịchọ akụkụ mmiri nke ubi gị 2-3x otu izu, yana ngalaba ndị ọzọ naanị otu ugboro n'izu, ọ bụrụ na. Ikpe ikpe ma ọ bụrụ na ubi gị kwesịrị ka mmiri, i nwere ike iji mkpịsị aka ule:
Nnwale Mkpịsị Aka : Tinye mkpịsị aka gị 2 ″ n'ime ala. Ọ bụrụ na e nwere mba mmiri ọ bụla, ịkwesịrị ịgbara ubi gị mmiri. Ọ bụrụ na ọ dị mmiri mmiri ruo ihe dị ka ″ 1, ọ nwere ike ọ gaghị achọ ka mmiri gbaa ya.
Ọzọkwa, jiri isi gị! Ọ bụrụ na ị nwere oké ifufe, ikekwe ọ dịghị mkpa ka ị gbaa mmiri ma ọ dịkarịa ala otu izu. Ọ bụrụ na mmiri na-ezobeghị n'ọtụtụ ọnwa ma nwee oke iwe, mgbe ahụ nye ubi gị ụfọdụ mmiri mmiri ịhụnanya!
Gbalịa ịgba mmiri n'akụkụ elu ala ahụ, ọ bụghị n'elu akwụkwọ gị.
Mgbe ị na-agba mmiri n'ubi gị, ị na-anwa ị nweta ya na usoro mgbọrọgwụ. Zere wụsara ya niile n'elu epupụta. Nke a bụ naanị mmiri lara n'iyi nke ga-ekpochapụ osisi gị.
Kama, mmiri na ala ozugbo na mgbọrọgwụ mpaghara. Zọ a ị ga - agba ume ngbanye mgbọrọgwụ na mmiri dị ka nke ọma dị ka o kwere mee.
esi akụ meyer lemon osisi
Mgbe ị na-agba mmiri, na-a waterụ miri miri.
Kama ị waterụ obere mmiri ugboro ole na ole n'izu, tụlee ịgbara mmiri miri emi otu ugboro n’izu. Nke a pụtara ịnọ otu ebe rue mgbe ị ga-ejide n’aka na mmiri abanyela n’ime ala. Ogbu mmiri ka mmiri na-aga, o yikarịrị ka ọ ga-esi na ala pụọ, na agbamume ka ukwuu ọ na-enye mgbọrọgwụ osisi gị ịgbasa miri.
Mkpụrụ osisi dị omimi na-apụtakarị ịmị ihe ọkụkụ ka mma, ya mere ịgbara mmiri miri emi na ogologo oge na-adịkarị mma!
Ọfọn, ebe ị nwere ya - ihe ntanetị banyere otu esi eme ka mmiri dị mma n'ubi ahụ. Ma ị na-agba veggie garden ma ọ bụ nnukwu ala, ụkpụrụ ndị a ga-echekwa gị ọtụtụ oge, ego, na nkụda mmụọ.
Dị ka mgbe niile, mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ aro na ihe ndị dị n'okpuru ebe a
ole mkpụrụ sunflower kwa oghere
esi gbanye ụtọ nduku osisi vaịn
chinchi ocha na osisi tomato m